ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပြောပြန်ရင်လည်း မောင်ပေါ လွန်ရာကျမယ်”
KP, True is bitter, but we have to accept it. by the way I nt wrong not only May Nyein the some bloggers also supproting the political activities and activists inside by expressing their own way. Anyway I appreciate your pointing out.
စာရေးသူ ပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေ နဲ့ မတန်ပါ.. ထို့ထက်ပို၍.. ဆိုးကျိုးသာ ပိုမို ထွက်လာနိုင်ပါသည်.. ဒီ့ထက်ပို အဆင့်မြင့်သော စဉ်းစားမှုမျိုးဖြင့်.. အကွက်မျိုးဖြင့်.. တိုင်းပြည် ကို အကျိုးပြုပါ ဟုသာ... (ကိုယ့်ကို ထိမည်ဆိုး၍ ထန်းလက် ကြိုကာထားသော.. ထို့ထက်ပိုစွာ.. ၀ါးလုံးကိုင်၍ ရေနှစ်သူများကို ထိုးနှစ်နေသော ကိုပေါ သို့...) ဒီတစ်ခါတော့ ရှင်းရှင်းပဲ... အဲ့လောက် ဥာဏ်နည်းရသလားလို့သာ မေးလိုက်ချင်တော့တယ်...။ "ပြန်ပြောရင် မလွန်ဘူးဟု ထင်သူတစ်ဦး"
စိတ်ပျက်တယ် .. စိတ်ပျက်ရင်ဘာလို့ လာဖတ်သေးလည်း မေးရင်.. (ကဲ.. ကြုံလို့ဗျာ)
Bravo! Absolutely true Ko Paw, our educated bloggers are living in the fancy world dreamingahero come back when things are right, meanwhile people are starving to death, locked behind bars for the half of their life, human condition are deteriorating, freedom of speech doesn't exist, students are killed in the streets.
ဦးလေးက ကျောင်းထားပေးပြီး အမေအိုကို ပြန်ပြုစုနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုပေါရေ။ ဆိုလိုတာက သူများအစိုးရကပေးတဲ့ စကော်လာနဲ့ ဘွဲရခဲ့လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဘ၀နှစ်ထားသူတွေပါ။
ကိုပေါရေ ခင်ဗျားရေးတာ ထိသွားပြီ.. ဟား ဟား ဟား ဟား...... ( လာရေးမှာ သိနေလို့ ကြိုရေးပေးထားတာ..)
Who is enjoying writing -ive blog fun everyday with jurong east pork for idiot's baby at singapore..?
ကိုပေါရေးတာကို သဘော တ၀က်တူတယ်။ ကျန်တဲ့တ၀က်တော့ ဖွင့်မပြောဘူးဗျာ။ ကိုပေါလောက် သတ္တိမရှိလို့။ ဒါဏ်ရာသီချင်းကို ပေါက်ကွဲစွာဆိုပြကြမယ့် Anonymous များစွာရဲ့ အနုပညာကိုလဲ တ၀ကြီးခံစားရအုံးမယ်ထင်ပ။
Good post. I would like to donate political prisoners and their families. But, the problem is we don't know how to donate. Does "Lan Pya Kyal" accept this kind of donation? Or should we try to contatct AABP in Thailand? I believe most of the Myanmar people won't hesitate to make some contributions if they know how to donate through the trusted channels. Many people have donatedalot during the September Revolution and Nargis through some collectors.
Those people deserve those government, I don't giveadamn!
If you don't give damn to Burmese people, you have no cause to come here! So back off!!!
To anonymous June 6, 2009 12:53 AM
အနောနီးမတ်(သွာ့စ်) တယောက် နောက်ဘယ်တော့မှ မလာတော့ပါ....
ဝါးလုံး ချီးသုတ် နောက်တချောင်း လာပါပြီ ခင်ဗျာ... ရှောင်ကြရှားကြ....
ထောက်ခံတဲ့သူတွေကလဲ သေချာရောဖတ်ရဲ့လားမသိ.. ဒေါ်မေငြိမ်းကလွဲ တယောက်မှ သောက်သုံးမကျဘူးလို့ ပြောတာကို... လွှတ်ထောက်ခံတယ်ဗျာ.....
ကိုင်း... မခင်မင်းဇော်ရေ... ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ....
ကျန်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေလဲ ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် ပိတ်ပစ်တော့ဗျိုးးး....
To Anonymous--June 6, 2009 2:28 AM
Don'tknow the meaning of this "နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက မဟုတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ တာဝန်ကျေကျေ လုပ်နေတာဆိုလို့ "
ကိုအောင်.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လမ်းပြကြယ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ စုံစမ်းကြည့်ပါ။ ဘယ်ကို လှူရမလဲဆိုတဲ့ အဆက်အသွယ် ရပါလိမ့်မယ်။ အိုးဝေ(စင်္ကာပူ)အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိရင်လည်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ကျနော့်အီးမေးလ်ကတဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။ အဲဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်တဲ့လူနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ငဲ့ကွက်စရာ မိသားစုရှိသူများအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ကို လုပ်ချင်ပေမယ့် မလွယ်ပါ။ ဘလောက်ရေးတိုင်း နိုင်ငံရေးပါရမယ်လို့ ရှိပါသလား။
တိုင်းပြည်က ပေါပေါရတဲ့ပညာတွေ သင်ယူတတ်မြောက်လာလို့ ကျွန်တော်တို့ အပေါ် တိုင်းပြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှိတာ အမှန်ပါ။
နိုင်ငံရေးအတွက် ရံပုံငွေ ကိုတကယ်ထည့်ချင်ပါတယ်။ ယုံကြည်လောက်တဲ့ လိပ်စာတွေညွှန်းပေးပါ။
နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်တဲ့ သူတွေထက် စာရင် နိုင်ငံရေးဘမ်းပြပြီး သူများပေးစာကမ်းစာ နဲ့ကြီးပွားနေတဲ့သူတွေ၊ တကယ်နိုင်ငံရေး မလုပ်ပဲ တတိယနိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ရအောင်လုပ်ပြီး အနေအစားချောင်နေသူတွေ၊ တကယ်နိုင်ငံရေး လုပ်သလိုလို ဟိုသံရုံးရှေ့ ဟိုဆိုင်းဘုတ်လေး ခဏသွားကိုင် ပြီး အလှူငွေမြှော်ပြီး စားနေရတဲ့ သူတွေ ကို အရင် ပြောပါဦးဗျ။
Any way, I like this stupid...Just Fun to make Noise.?
When are you retruning to Burma for good contribution? Let us know.
ဘလောက်သက်သက်ရေးပြီး နိုင်ငံရေးမပါတဲ့ သူတွေကို ဝေဖန်ဖို့ အခွင့်အရေး ခင်ဗျားမှာ မရှိဘူးထင်တယ်။ ခင်ဗျားလည်း တကယ် နိုင်ငံကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်ရင် (ခင်ဗျား စာထဲကလို) မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ပါလား ခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားမိသားစု အတွက် နောက်ဆံမတင်းရအောင် အလှူငွေ ကောက်ပေးပါ့မယ်။
ဟဟ ။ အနာပေါ် ဒုတ်ကျကုန်ပြီ ကိုပေါရေ ။ ဒါကြောင့်ပြော တာ မှန်တာပြော လူမုန်း၏ တဲ့ . ဟိဟိ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဖွဲ့ထားတဲ့ ဘလော့တွေ့ဘူးတယ်ဗျ.. နိုင်ငံရေး မဟုတ်ပါဘူး...
ဆော့ဝဲလ် တွေ ရှဲပေးတဲ့ဘလော့တွေ လဲရှိတာပဲ...
ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဘလော့တွေ ဒေါက်တာဥာဏ်တို့ လဲရှိတယ်.. အများကြီးပြောမယ် ဆိုရင်...
Pls take action immediately for Ko Paw's security.
No need to take security..
People don't take serious from idiots.
just write fun @ free time..lah
i am sorry for her wife and baby for their stupid they deserve to got..?
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး နည်းနည်းပြောချင်လာလို့ပါ။ ကျွန်မက ဘလော့ဂါမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုပေါပြောတာကို နာလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မျှတမှုမရှိတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ တွေ့ရလို့ပါ။
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဘလော့တွေဟာ ဖတ်ပျော်အဆင့်တောင် မရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
ဘလော့ရေးသူတိုင်းဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာရေးဆရာတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ (မေငြိမ်း၊ မနော်ဟရီ စတဲ့ စာရေးဆရာတွေကလွဲလို့ပါ)
ဒီလူတွေ ဘလော့ရေးနေတာဟာ အနုပညာမြောက်ရမယ် ရယ်လို့လဲ စိတ်ထဲမှာ ရှိချင်မှရှိမယ်။ ကိုယ်နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ဖြစ်ပျက်တာ-ကိုယ်ခံစားရတာတွေကို ဖွင့်ဟချင်တာ၊ ၀ါသနာတူ မိတ်ဆွေသစ်တွေ တိုးပွားချင်တာ၊ ကိုယ်သိထားတာလေးတွေ မျှဝေချင်တာ၊ စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဘလော့ရေးနေကြတာလို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရေးသားချက်တွေဟာ အနုပညာမြောက်ခြင်း မမြောက်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှု ရှိခြင်းမရှိခြင်းဟာ ဝေဖန်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ ရှုံ့ချစရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ကိုယ်ကြီးပွားတိုးတက်ချင်လို့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်တယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်၊ ကိုယ်ကြီးပွားမှ ကိုယ့်မိသားစု ကြီးပွားတိုးတက်မယ်၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုး ကိုယ့်ဝန်းကျင် ကြီးပွားတိုးတက်မယ်၊ ကိုယ်ဟာ တခြားသူတွေကို မထောက်ပံ့နိုင်သေးရင်တောင် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဆွေမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ငွေတွေဟာ အလဟဿ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနေတယ်လို့ဆိုရမယ်။ ကိုယ့်မိသားစုကို ထောက်ပံ့တာဟာလဲ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ထောက်ပံ့နေတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
အများစုက နိုင်ငံခြားမှာ ပျော်လို့နေနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဖြစ်လို့သာ နေကြသူချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အဆင်ပြေရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်တိုင်းပြည် အခြေအနေကောင်းရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်မယ်လို့ ရည်ရွယ်တာဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မမေ့ရာရောက်တဲ့အတွက် ဒါဟာ ကောင်းသောာ အချက်ပါပဲ။
ကျွန်မအသိတယောက်ရဲ့ သာားကလေးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ဖို့ ဗီဇာရပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း အမေရိကန် ဗီဇာဆိုတာ အင်မတန် ခက်တာပါ။ သူ ၂ နှစ်သွားသင်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ မိဘရင်ခွင်သာ အနွေးထွေးဆုံးပါ ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ပါ။ နောက်တော့ သံလျင် တာဝမှာ ကျောင်းဆက်တက်တယ်။ ဘာကြောင့် ပြန်လာတာလဲ ဆိုတော့ သူဟာ အိမ်မှာ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား၊ အချွေအရံသင်းပင်းနဲ့ ဘော်ကျော့ နေနေကျသူဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ရတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေသားမကျပါဘူး။ သင်ရတဲ့ စာတွေကလည်း သူ့အနေနဲ့ ခက်လွန်းတယ်။ ၂ နှစ်တာကာလကို အောင့်အီးနေပြီးနောက် သူပြန်လာခဲ့တယ်။ အရင်လိုပဲ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်က ပေးတဲ့ ဘွဲ့တခုတော့ရသွားတယ်။ စီးပွားရေးအနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ဂိမ်းနဲ့ အင်တာနက် ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ နိုက်ကလပ်သွား၊ စတိတ်ရှိုးသွား၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေဆဲပဲ။ အဲဒီလို လူမျိုးကတော့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တာလား။
(မပြီးသေးပါဘူး တခါထဲ တင်လို့မရလို့ ၂ ခါခွဲတင်လိုက်ပါတယ်)
တိုင်းပြည်က ပညာတွေ သင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အဲဒီပညာတွေရဖို့ သင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာနဲ့ ပြည်ပမှာ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း လုပ်စားနိုင်တဲ့သူက နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို နိမ့်ကျလွန်းတဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ကို ဘယ်နိုင်ငံခြားကမှ လက်မခံတော့ တခုခုဖြစ်ဖြစ် ပြန်တက်ကြရတာပါပဲ။ အဲဒီအတွက်လဲ အထိုက်အလျောက် ကြိုးစားကြရတယ်။ အပင်ပန်းခံရတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ မရပါဘူး။
ပညာဆက်သင်ဖို့ အခြေအနေမပေးသူတွေကလည်း တိုင်းပြည်က သင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ (ကာယအလုပ်) ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ကြရပါတယ်။
ပညာတတ်တွေ မြန်မာပြည်မှာ သိပ်လိုအပ်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှိနေပြီးသား ပညာတတ်တွေကိုရော အသိအမှတ်ပြုသလား။ ထိုက်သင့်တဲ့ နေရာပေးသလား။ လေးစားမှုမျိုးရှိသလား။
ဦးနှောက်ယိုစီးမှု (brain drain) ဆိုတာဟာ ပြည်တွင်းက ပညာတတ်တွေ ပြည်ပသွားမှ သာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ ရှိပြီးသား ပညာတတ်တွေကို ထိရောက်စွာ အသုံးမချရင်လဲ ဒါဟာ ဦးနှောက်ယိုစီးခြင်း တမျိုးပါပဲ။
ကျွန်မရဲ့ ဦးလေးတယောက်ဟာ အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိတယောက်အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ နှစ်ရှည်လများ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ တိကျတယ်၊ ပြတ်သားတယ်၊ မဟုတ်တာ မလုပ်ဘူး။ ဒီတော့ တဖြည်းဖြည်း ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူဟာ သဟဇာတ ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ အလုပ်ထဲမှာ တချိန်လုံး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်လာရတယ်။ နောက်ဆုံး အလုပ်ထွက် နိုင်ငံခြားသွားလိုက်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ ၀င်ငွေရလာတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး သူ့ဆရာတွေကို ကန်တော့တယ်။ အမျိုးထဲက ဆင်းရဲသူတွေကို ထောက်ပံ့တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ဇရပ်တွေ ရေတွင်းရေကန်တွေလှူတယ်။ သူသာ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ဆက်လုပ်နေရင် အခုလို စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ မလှူနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်နဲ့ အခုချိန်ဆို ပင်စင်ယူပြီး ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေမှာပါ။ ခု ဦးလေးအသက်က ၆၇ နှစ်၊ ကျန်းကျန်းမာမာ အလုပ်ဆက်လုပ်နေဆဲ။ ပင်စင်ယူရင်ရပေမဲ့ လုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် မယူသေးပါဘူး။
ပြောချင်တာက လူတွေဟာ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ရပ်တည်နေကြသူတွေပါ။ ဟိုသူကတော့ ဒါလုပ်တယ် ... မင်းက ဒီလိုမလုပ်ရကောင်းလားလို့ အပြစ်တင်မယ့်အစား သူဒီလိုမလုပ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို နားလည်စာနာပေးသင့်တယ်။ (လုပ်တဲ့သူကရော ဘာလို့လုပ်တာလဲ။ သူ့ရင်ထဲက တိုင်းပြည်ကို တကယ် ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လား၊ ဒီလိုလုပ်လို့ ရလာမယ့် အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်တွေကြောင့်လား။ ထပ်ပြီး စဉ်းစားစရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။) ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေ ခဏထားပြီး ယေဘုယျပဲ စဉ်းစားကြပါစို့။
ကျောင်းသားတယောက်ဟာ သူ့ကျောင်းစာကို သေချာ ကျက်နေတယ်ဆိုရင်၊ အလုပ်သမားတယောက်ဟာ သူ့အလုပ်တာဝန် မလစ်ဟင်းအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုရင် လောလောဆယ် သူတို့တာဝန် ကျေပါတယ်။ သူတို့ စာကျက်ရခြင်း အလုပ်လုပ်ရခြင်းဟာ တချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလေး ရင်ထဲမှာ ခိုအောင်းနေတာကိုပဲ မုဒိတာပွားသင့်တယ် မဟုတ်လား။
ဖတ်ဘူးသမျှ ဘလော.တွေထဲမှာ ဒီဘလော.က
တနေ.ကို ၇၅ ခါလောက်လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ.လူ ကိုပေါ ကလဲ အရမ်းကို တော်ပါတယ်။
အမြော်အမြင် လဲ အရမ်းရှိပါတယ်။အရမ်းကြီးကို
လေးစားပါတယ်။ဖြစ်နှိုင်ရင် တနေ.ကို ပို.စ် အသစ်
၇၅ ခုလောက် ရေးစေချင်ပါတယ်။အားရပါးရဖတ်ချင်
လို.ပါ။အဲလို ရေးရင် တနေ.ကို ၅၆၂၅ ခါလောက်
လာဖတ်ဖြစ်မယ် ခင်ဗျ။ကိုပေါ က ဘာအကြောင်း ကို
ဘယ်လိုပဲရေးရေး ကြောင်ချေး ကတော. ဖတ်မ၀
မှတ်မ၀ ပါပဲ။ပညာတွေလဲ တော်တော်ရပါတယ်။
အခုလို မျိုးဖတ် ရှုလေ.လာခွင်.ရလို.လဲ ကိုပေါ
ကို ကြောင်ချေး အနေနဲ. ကျေးဇူးဥပကာရ
ကြိတ်ပီးလေးစား နေရတဲ. နေပြည်တော်က
အဘ များ လိုပဲ ခေတ်မှီဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်သော
မြန်မာနိုင်ငံသား များကို လိုအပ်သည်များ
သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။။။
၆ ယောက် ၃တန်း
ကျန်နေတဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်က စစ်သေနတ်အောက်က မိမိ မိသားစုရဲ့ ဘေးကင်းရေးအတွက် ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်အရင်ဖြည့်တတ်ကြတဲ့ လူ့လောကမှာ ကိုပေါက ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းယမ်းနေတာကိုးးးး
ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် ခု ကိုပေါနေနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ကိုပေါကရော အခွန်မပေးဘူးတဲ့လား? မပေးဘဲ နေရဲရဲ့လား?
ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဘာလုပ်နေပါတယ် ဆိုပြီး ကိုယ်လုပ်နေတာတွေကို လူတွေသိအောင် ချပြနေရဦးမှာတဲ့လား (နံမည်ကြီးချင်နေလို့ မှတ်ပါမယ်) လှူတယ်ဆိုတာကရော ဘယ်လိုလှူမှ ဘယ်ဌာနကိုလှူမှ ဘယ်နေရာကိုလှူမှလို့ သတ်မှတ်ထားလို့ ရပါသလား။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်နေလဲ သိအောင် လုပ်တာက သူများတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ လိုက် မေးငေါ့နေတာထက်စာရင် ပိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
ကိုပေါကရော သန်းရွှေကို “သေနာကြီး၊ စောက်ပေါ/ရူးကြီး၊ အာဏာရူးကြီး” ဆိုတဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆဲဖူးရဲ့လား။
သူများတွေ လူစုပြီး အော်တာကို ချီးကျူးနေတာကရော နိုင်ငံရေးလုပ်တာလား၊ ဘလော့ဂ်မှာ အဲ့လိုပို့စ်တွေ တင်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ သတ်မှတ်တာလား။ (ရှင်းပြပါ)
အစကတော့ ကိုပေါကို နိုင်ငံရေးသမားလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လူတိုင်းက စစ်ဖိနပ်အောက်က လွတ်ချင်ကြတဲ့ သူ ချည်းပါပဲ၊ မနိုင်တဲ့ အခါမှာ လက်လျော့ပြီး ကြည့်နေရတာလဲ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး မဟုတ်လား။ ဟိုးအရင်တည်းက ရအောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် စစ်သေနတ်တွေအောက်မှာ လူပေါင်းမြောက်မြားစွာ စတေးခဲ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတိုင်းကို ဘာမှ လုပ်မနေဘူးလို့ သိမ်းမပြောပါနဲ့..
NLD ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ဒီတိုင်းပြည်ရောက်မှ သိပါတယ်၊ ဘယ်အရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည် ဆိုပြီး အငြိမ့်ပွဲတွေလုပ်ပြီးရင် အဲ့ဒီကရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ သူတို့ချည်းပဲ ထိုင်စားနေကြတာပါ၊ ဘယ်ကိုဖြင့် ဘယ်လောက်လှူလိုက်တယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြားရပါဘူး၊ အဲ့ဒီ NLD အိမ်ကိုရောက်ဖူးပါတယ်၊ နေနေတဲ့ လူတွေက အလုပ်လက်မဲ့တွေ များပါတယ်။ တကယ် တက်ကြွစွာနဲ့ လှူလိုက်တဲ့ ငွေတွေကို လှူတဲ့ နေရာထိ တိကျစွာ ရောက်ပါတယ်လို့ အာမခံပြီး ဓါတ်ပုံတွေ အလှူစာရင်းတွေနဲ့ တင်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ဌာနတွေကို လှူမယ့် သူချည်းပါပဲ။ ဒီလို မဟုတ်ပဲ ကြားထဲကလူတွေ ကောင်းစားနေတာကရော?
khin khin and nyalay (Malaysia) is right. Most of the people concerning about their own country but they are surviving for life. You shouldn't be treating like all the people are the same. What ever you want to do you can do it but don't force people, if they want to do, nobody can stop it.
About the donations, Lan Pya Kyal will accept or not? Where and who to give donations????
NG PAW, U CAN DO BETTER THAN THIS...
ရံပုံငွေ ထည့်ချင်ပါတယ်..စိတ်ချရပြီး လိုအပ်တဲ့လူတွေလက်ထဲ တကယ်ရောက်မယ့် အဖွဲ့ အစည်းဆီကိုပါ..ဘလော့တွေ ဖတ်မပျော်ရင် မဖတ်နဲ့ပေါ့..နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရတာတော့ မိတကွဲ ဖတကွဲ နဲ့ ဘယ်သူက လုပ်ချင်ပါ့မလဲ..ဒါပေမယ့် ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုး တွေကို ထောက်ပံ့လို့ ရတယ်လေ..မြန်မာပြည်မှာဆို ဒီလို ထောက်ပံ့်နိုင်မလား..နိင်ငံခြားပြန်ဆိုတဲ့ တက်ဂ် တွေမှာ ရေးထားတာ တချို့ဆို တော်တော် သနားဖို့ကောင်းတယ်..ဒါမျိုးကျ ကိုပေါက မဖတ်ဘူးလား..ကိုပေါရေးတာကို တဝက်တော့သဘောတူပါတယ်..လွပ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်တယ်ထင်လို့ ဒီကွန်မန့်ကိုရေးတာပါ..
ကိုပေါ စာ အရေးအသားကောင်းပါတယ် ... ဒါပေမယယ့် အခြေနေ အချိန်ခါကြည့်မရေးတတ်ဘူး .. တခါတလေလဲ .. ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ ချော်သွားတယ် ... ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးနေပါတယ် ..
ကိုပေါ ရေးသလိုမျိုးတွေ ဘလော့တချို့မှာလဲ ဖတ်ရပါတယ်... မျှမျှတတဆိုရင် ကိုပေါရေးထားတာကို စဉ်းစားခိုင်းသလိုမျိုး ... ခင်ခင်နဲ့ ညလေးတို့ ၂ယောက် ရေးထားတာကို စဉ်းစားကြည့်ပေးပါလား (ဘေးက အာချောင်နေတာတွေလဲ နဲနဲ ရပ်ပြီးတော့ပေါ့ .. ကလေးဆန်လွန်းလို့ပါ)... သူတို့ရေးတာတွေ သဘာဝကျပါတယ် ... ကိုပေါ ဒီတပုဒ်ကိုရေးထားတာကတော့ နဲနဲprototype ဖြစ်နေလားလို့ခင်ဗျာ ... ကိုပေါရေးသလိုမျိုးရေးကြပါတယ် .. ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာကော အဲဒီလို ဖြစ်နိုင်လို့လား ... သူတို့၂ယောက်ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ကိုပေါ ထပ်ဆွေးနွေးကြည့်ပေးပါဦး ...
We needagroup leader who hasaqualify leadership.
Each group leader should be co-operated and communicated regularly.
Who want to be???
I amaonly follower.
ကိုပေါ အနေနဲ့ စည်းရုံးပြီး ရေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ခုထက်ပို effective ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုပေါရေးထားပုံက ကိုပေါ မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ လေသံနဲ့ တူနေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးနေတာ နိုင်ငံရေးအတွက်မဟုတ်ပါ။ ဘလော့ဂ်ရေးနေတာ စာရေးဆရာဖြစ်လို့ မဟုတ်ပါ။ရသစာပေ ရေးဖို့ ရေးနေတာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်အတွေ့ အကြုံ၊ ကိုယ့်ခံစားချက်၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရေးဖို့ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်မှာ အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တူညီတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေကြပါတယ်... ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေချင်တာပါပဲ... အဲဒီအတွက် အချို့ဘ၀တွေ၊ အသက်တွေပါပေးဆပ်ကြသလို တနည်းနည်းနဲ့ပေးဆပ်နေကြပါတယ်... အနည်းဆုံး စိတ်ခွန်အားနဲ့ပေါ့... ဒီနေရာမှာ တယောက်နဲ့တယောက် နားလည်ပေးပြီး စုစည်းညီညာကြဖို့က တခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရန်အတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်သော အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ...
သောက်ရူးတွေ ပေါတိုင်းလိုက်ပေါရင် ပေါခက ဈေးကြီးတယ်..... အေဘီအက်စ်ဒီအက်က လွှတ်မှ ထောင်ထဲရောက်တာမဟုတ်ဘူး.. ဒီကောင်တွေလုပ်သလိုလုပ်လဲ ဟိုထဲရောက်မှာပဲ...
ရေးတာတော့ကောင်းပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ရေးတိုင်းမကောင်းတဲ့ အရာတွေရှိပါတယ်.
ရေးရင်လဲ အမှန်အတိုင်းကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ဘက်မလိုက်ပဲ ရေးပါ..
Lets go like this,
I appreciate your pointing out.
Don't care about all critical comments. They don't know real burmese life in Myanmar.
Please share and takealook the document about Cyclone Victims and how the government have done.
ညလေးတို့ .. ခင်ခင်တို့ပြောတာ..ထောက်ခံပါတယ် ..
ကိုပေါကို အရင် က နိင်ငံရေးသမားဆိုပြီ .. ထင်ထားမျှတွေ .. အားလုံးမရှိတော့ပါဘူး ..
အဲဒီဘလော့တွေဖတ်တာကမှ .. ကိုယ်မသိတာလေးတွေသိရ ..ပျောစရာလေးတွေခံစားရ ..ဆိုတဲ့ အကျိုးလေးတွေရပါသေးတယ် ..ကိုပေါရဲ့ ဘလော့ကိုဖတ်တော့ .. အော်...ဒီလူတယောက် ..ကိုယ့်ကိုကိုယ် ..သိပ်အထင်ကြီးနေရှာတယ်လို့ ..သနားမိပါတယ်..
ကိုပေါ ပြောတာ ဟုတ်တယ်။
မေငြိမ်းတောင် ကိုပေါက ကောင်းတယ်ပြောလို့ ဒီတခါတော့ ရှိစေတော့။
ဂျောက်ဂျက်လို လူမျိုး၊ ကိုပေါလိုလူမျိုးမှ ကျုပ်က အထင်ကြီးတာ။
ဂျောက်ဂျက်လိုစာသားမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသား ဖြန့်ချိ ထုတ်ဝေနိုင်သလို
ကိုပေါလိုလဲ ဝါးလုံးချီးသုတ်ရမ်းတဲ့လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ရေးမျိုးလဲ ရှိရမယ်။
ကိုပေါပြောတာမှန်တယ်၊ ကိုပေါပြောသမျှ မျက်စေ့မှိတ်ထောက်ခံတဲ့
သူတွေထဲမှာ မျိုးမြင့်မောင်ပြီးရင် ကျုပ်ပဲ။
” ရီးဘဲထင်တယ် ” လို့အော်တတ်တဲ့ယာမကာလုင်တ
ကြောင်း blogger ရပ်ကွက်မှသတင်းရရှိပါသည်။
သူတွေထဲမှာ မျိုးမြင့်မောင်ပြီးရင် ကျုပ်ပဲ။
JD and CMA first...
They 'r really wasting their time...
ဒီဒီ ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ တချို့ကပြောတယ်.... ကလေးဆန်တယ်တဲ့..... ကိုပေါနဲ့ မျိုးမြင့်မောင်က လူကြီးဆန်တယ်တဲ့..... ပြောရင်မကောင်းရှိရော့မယ်.... အဂတိလိုက်စားနေပုံ....
သူများကို အဓိပ္ပါယ် မရှိ ကဲ့ရဲ့ တတ်သူသည် အမှန်ပြောတတ်သူ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာတတ်....။
Now, this time is not to celebrate Debate,to show 'UNITY'.
The truth is now Burma become the land of prostitute and pagodas
How can we " Unite " with These Idiots..?
See Dear All!
Nga Paw and his followers (Myo Myint Maung, CMA, JD etc.. ) are rubbish of the society. It will be difficult for our country to get freedom from military GV because of such kind of stupid idiots.
ပညာရှင်၊ အကျော်ဒေးယျ တွေရှိနေတာ
ဗိုလ်ချုပ် ရယ် နောက်တစ်ခါ
“ပင်လုံ” စာချုပ် ချုပ်ရင်
Online ပေါ်တက်ခဲ့ နော်...
Post တစ်ခုနဲ့ အပေါ်ကလူတွေပြော သလို
Unity တို့ Reunion တို့ ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ ကတော့...
ဟုတ်ကဲ့..အနောက်ဖက် က နေထွက်တာဘဲ မျှော်နေမယ်
pls dont delete my comments..
Your post but not include your name
ကျောက်တုံးကြီးကို ကိုယ်ကိုတိုင်က ၀င်တွန်းကြဖို့လိုပါတယ်။
ဘလော့ရေးတိုင်း နိုင်ငံရေးလား ဘလော့ရေးတိုင်း လွတ်လပ်ရေးရနေလို့လား
နိုင်ငံရေးဘလော့တွေကို လေးစားပါတယ် ကိုပေါတော့မပါဘူး နောက်ပြီးတော့
ပွဲလန့်မှ ဖျာထခင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဘလော့ဂါတွေကိုလည်း စောက်ထင်မကြီးဘူး
ဘယ်သူမှ ငါတို့ဘလော့လာဖတ်ပါလို့ မဖတ်ခေါ်ဘူး ဘလော့ဆိုတာကိုရော နားလည်ပါရဲ့လား
သေချာရောသိရဲ့လား ခင်ဗျားကရော ဘလော့မှာပဲ အော်နေတာမဟုတ်ဘူးလား သတ္တိရှိ ထွက်ချလေဗျာ
ခင်ဗျားအာသလောက်တော့ လူတိုင်းအာတတ်သားပဲ ခင်ဗျားနောက်လိုက်ခွေးတွေရော
ခင်ဗျားကိုရော အထင်မကြီးဘူး ခင်ဗျားနောက်လိုက်ခွေးတွေကလည်း အောက်ဆွဲ dick sucker တွေနေမှာပဲ
အရင်ကတော့ မဆဲဖူးဘူး ဖတ်တောင်မဖတ်ဘူး နိုင်ငံရေးဘလော့ဂါထဲမှာ သောက်သုံးမကျ အအော်အကောင်းဆုံး
လေအကျယ်ဆုံး မို့လို့ကို တမင်မဖတ်တာ... ဦးနှောက်လည်း ရှိဟန်မတူဘူး ဘာကို တိုက်ခိုက်ရမယ် ဘာကို ဆော်ရမယ်ပဲ
ရှာနေဟန်တူပါရဲ့ ခင်ဗျားက ဘလော့တကာ လျှောက်လည်နိုင်အောင်လည်း အားသေးတယ်တူပါရဲ့
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်တဲ့ ဦးနှောက်က ချီးဘရိန်း ပညာတတ်လေ ဘ၀င်မြင့်လေ အောက်ခြေလွတ်လေ
သောက်သုံးမကျလေ အတွေးအခေါ်ဒူလေ လူတကာသူ့လောက် မသိဘူးထင် ဘ၀င်လေဟတ် အရူးဘုံမြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို
ဒီပို့စ်က သက်သေပြတာပဲ.... ကိုပေါဆိုကတည်းက စောက်ပေါလေပဲထွက်မှာ... ခင်ဗျားလေကျယ်လို့ နိုင်ငံတော်သာ လွတ်လပ်မယ်ဆိုရင်
ခင်ဗျား ကလည်း ဘယ်ရာထူးမှန်းသလဲ မမှန်းပဲတော့ နေမယ်မထင်ပါဘူး.. ဟားဟား ဒီလို မြန်မာတွေ အားလုံး စည်းလုံးအောင် စည်းရုံးနိုင်တဲ့အတွက် တော်ပါပေတယ်
ဘယ်သူမှ ငါတို့ဘလော့လာဖတ်ပါလို့ မဖိတ်ခေါ်ဘူး ဘလော့ဆိုတာကိုရော နားလည်ပါရဲ့လား
ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေး အရယူကြ
ပို့စ်ရေးပြီး နအဖ ဆန့်ကျင်ကြ စောက်ရူးကိုပေါ
ပို့စ်တွေကို နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြောင်း အနိုင်တိုက်ကြ အာကြ ဟားဟား
အမှန်တရားဆိုတာ ခင်ဗျားမိန်းမ ထမိန်ထဲက အော်တာလား
အမှန်တရား... ဆိုတာ အမှားတရံပေါ့ဗျာ..... ဟီးဟီး.....
ဟေ့ ခင်ဗျားမိန်းမကို ရန်ကုန်မှာ ပြန်ထား ခင်ဗျား စလုံးကအော် ခင်ဗျားမိသားစု ရန်ကုန်မှာ ပြန်ထား ခင်ဗျား ခင်ဗျား ဒီကအော် ဘလော့ဂါတွေဆိုတာ ရင်ဖွင့်ချင်ဖွင့်မယ် သူတို့ သူများနိုင်ငံမှာ စိတ်ညစ်တာတွေ စိတ်ထွက်ပေါက်တွေ အော်ချင်အော်မယ် မိသားစုကို ငဲ့ကြည့်လို့ နိုင်ငံရေးကို မအော်တာ ရှိချင်ရှိမယ် ခင်ဗျား ၀ါးလုံး ချီးသုတ်မရမ်းသင့်ဘူး ခင်ဗျားတကယ်လုပ်ရမှာ ဘလော့ဂါတွေကို စည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိရမယ် ဒီလိုအော်မယ့်အစား ဘလော့ဂါတွေအကုန်လုပ်ချင်လာအောင် မြန်မာတမျိုးသားလုံးပါလာအောင် ခင်ဗျားဘလော့က စည်းရုံးနိုင်ရမယ် ဒါဆိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ် ခုတော့ ရန်တွေ့လိုက်တယ် ငါးစိမ်းသည်မိန်းမထက်တောင် ဆိုးရွားနေပါလားဗျာ
ကိုပေါ ကိုပေါ အတော်တရားရဖို့ကောင်းတဲ့လူ အတ္တဘော စောက်ပေါရေ
ဟိဟိ educated blogger တဲ့ သွပ်သွပ်သွပ်
နာမည်အသစ်ပြောင်းလိုက် ချီးသုတ်ကိုပေါရဲ့ ချီးအိမ်သာရိပ် ခေတ္တ ထမိန်ခြုံ ကိုပေါ
ကိုပေါကို ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ကိုပေါနောက်လိုက်ကိုပေါဘောဆွဲတွေကိုလည်း ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် သာဓုသာဓုသာဓု ပြောလိုက်ရတာ မြိန်မှမြိန် ဟားဟား ကောင်းတယ်ဗျာ နောက်စိတ်ညစ်ရင် ဒီမှာလာဆဲအုံးမယ် ပျော်လိုက်တာဗျာ ဆဲတဲ့လူတွေရော ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေရော ကိုပေါနဲ့ နောက်လိုက်တွေကို ဆဲရတာ မြိန်မှမြိန်
ငါ့စကားငါတာဝန်ယူတယ် အောက်က ၃နာရီ ၃၂ မိနစ်ကနေ ၃နာရီ ၅၂ထိဆဲတာ ငါချည်းပဲ အေး တခြား anonymous တွေကို ပတ်မရမ်းနဲ့
၁၃ကျပ် အဲလေ.. သို့
“ပေါဘောမ” အမှားတရံ အတွက် သင့်တွင်
ငါ့ဖိနပ် လာပြန်လဲ ပေး
Anonymous တောင် မှတ်ပုံတင်ထား
ဟုတ်ကဲ့..ထောက်ခံ ပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်
အကုန်လုံး ကိုထောက်ခံ ပါတယ်..
ဒါနဲ့ ပိုစ့် က ဘာတွေရေးထားတာလဲ .((((ငှင်))))
အင်း............ငပေါ........ငပေါ ။ အောင်မြင်ပါပေ့ ကွာ။ တကယ့်ကို ငါးစိမ်းသယ် ပါလား ကွ ။ ခုတော့မင်းအသိဥာဏ်ဘယ်လောက်ထိနည်းတယ်ဆိုတာ လူတကာသိသွားကြပြီ ။ နေစမ်းပါအုံး..........မင်းကသူများတစ်ကာကို လိုက်ပြီး လက်ညှိုးထိုး အပြစ်တင်ရအောင် မင်းကိုယ်တိုင်ကကော ဘာကောင်မို.လဲ ။ နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားတော့ကော ဘာဖြစ်သလဲ။ မင်းလုပ်ရမှာက အဲဒီ မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေကို စည်းရုံးရမှာလေကွာ ။ ခုတော့ မင်းလိုကောင်ဦးဆောင်တဲ့ပွဲဆိုရင် ဝေးဝေးကရှောင်တာပဲကောင်းတယ်ကွာ ။ တော်သေးတာပေါ့ကွာ...........ဘလောက်ပဲပိုင်နေသေးလို. ။ နိုင်ငံရေးအာဏာများမင်းလက်ထဲပိုင်နေရင် ခုလက်ရှိ သန်းရွှေတို.ထက်တောင် ဆိုးဝါးမယ်။
စကားလုံး တွေကပါးစပ်နဲ့ ဆန့် ရဲ့ လားလို့ မေးချင်တယ်။
In addition to above interview...( his latest great idea as follows) :
That's why....we said to "မတန်ခူး "..
Don't waste your peaceful time..anymore..please..!
”သည်လိုသာ ဖြစ်မလာသေးလို့ ကဲ့ရဲ့ရစတမ်းဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပြီး ရှိခိုးနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဟာလည်း အလောင်းအလျာဘ၀က လေးအသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတသိန်းတိုင်အောင် ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လား။”
သည်လိုပြောတာ ငပေါ.. အမတန်ခူး..ရေ။
ကျနော် ဒီပို့စ်မှာ မှတ်ချက်မရေးခဲ့မိတာ သိပ်မှန်တယ်။
မုသားက ကမ္ဘာပတ်နေချိန်တွင် အမှန်တရားက ဖိနပ်စီးတုန်းဖြစ်နေပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အလုပ်ဖြစ်နေဦးမည်။
ကပေါ ... ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိလောက်အောင်ပါဘဲလားဗျာ.. ပရိတ်သတ်ကြီးကို ..တခုခုထပြောပါဦး ..ကပေါရဲ့ ..
MM BLOGGERS said...
ဟုတ်တယ် ကိုပေါ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ကိုယ်တာဝန်ယူရင် တခုခုပြန်ပြောသင့်ပါတယ်။
ခါတိုင်းဆို ကွန်မန့်တိုင်း တခွန်းမချန် ချက်ချင်း တုန့်ပြန်တတ်တဲ့ ကိုပေါက ခုတော့ ဘာလို့ ငြိမ်နေတာလဲ။ ကိုယ်မှားတာ ကိုယ်သိလို့လား။ ကိုယ်ရေးတာ လွန်သွားမှန်း သိရင်လဲ တောင်းပန်ပါ။
နှုတ်တရာ စာတလုံးတဲ့။ ဘလော့ပေါ်မှာ ဘလော့ဂါအားလုံးကို တရားဝင်စော်ကားတဲ့ ကိုပေါကို ဘလော့အသိုင်းအ၀ိုင်းအားလုံးက အလေးအနက် တညီတညွတ်ထဲ ရှုံ့ချတယ်။
သင့်လုပ်ရပ်ကို သင်သိလျှင် အချိန်မီ ပြုပြင်ပါ ကိုပေါ။
we all are so shmaeful for u. it is better for u to be quiet. we really superise for ur IQ. How u get bachelor degree?
Go out Nga Paw said...
I can not type Myanmar font, but i feel same as below
Judging from the way you write, I doubt you areaYIT ex-student. If you are, don't act like you are representing all YIT ex-students.
To Anonymous: June 7, 2009 7:18 PM
pls be quiet if u want to see our country improve
June 7, 2009 7:32 PM
Nga paw .. Nga Paw....
YIT ex students said...
We all are shmeful for u
ချီးဘရိန်း ပညာတတ်လေ ဘ၀င်မြင့်လေ အောက်ခြေလွတ်လေ
Pls be quiet!
It is not possible for Myanamr to get freedom because of stupid idiot like Nga Paw.
ဟားဟား ဒီလို မြန်မာတွေ အားလုံး စည်းလုံးအောင် စည်းရုံးနိုင်တဲ့အတွက် တော်ပါပေတယ်
"နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားမိသားစုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက် ထောင်ဝင်စာ စသဖြင့် တနည်းနည်းနဲ့ ပံ့ပိုးလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်ကို အသက်ဆက်ပေးတာနဲ့တူပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ငွေပမာဏကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။"
We ordinary people have to work for ourselves, pay tax to sucker government in Burma, and we have to donate those activists inside Burma. Fine with that.
Then how about bums from exile activists who begged foraliving?
ဤ ပိုစ့်ဖြင့် “ဒီမိုခရေဇီ” ရလတ္တံ..
အဲဒီ အနောနီးမတ်စ် ၁၁ ခုပိုင်ရှင် ကော်မန့်ကြီး... အဲလေ မှားလို့... ကော်မန့် ၁၁ ခုပိုင်ရှင် အနောနီးမတ်ကြီးက ဘယ်နှယ့် ကျုပ်ကော်မန့်ကိုများသူရေးတာတဲ့.... ပေါဘောမလေးက သတ်သတ်ဗျို့ ....
ပေါဘောထီးက ဘယ်ကကြွေးလာတောင်းနေရတာလဲ.. ရှုပ်ကုန်ပါပြီဗျာ... ဒီနေရာကို ဘာမျန်းမှတ်လို့လဲ ဟွန်း... ငစိမ်းတန်းမဟုတ်ဘူးဟေ့... နားလည်လား....
အင်းးးး ... ကိုပေါရဲ့ တင်သမျှပို့စ်တွေထဲမှာ ဒီပို့စ်ကတော့ Comment အများဆုံးပို့စ် ဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ကိုပေါ မအားသေးလို့ ဘာမှ ပြန်မပြောသေးတာဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော်မြင်တာလေး နည်းနည်းပြောပါရစေ ကိုပေါရေ
အတိုက်အခံလုပ်ခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပါဗျာ
နံပါတ် ၁ အပိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ကတော့ ကျွန်တော်က ဘလော့ဂ် သိပ်မဖတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှ မပြောတတ်ပါ။ မပြောလိုပါ။
ဒုတိယ အပိုဒ်ကတော့ ကိုပေါအမြင် နည်းနည်း လိုသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုပေါပြောသလို ငွေလိုချင်လို့ ၊ ငွေရချင်လို့ ၊ ချမ်းသာချင်လို့ လာတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် အသေအချာကြီးကို ပြောရဲပါတယ်။
ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အလုပ် ၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ လစာ (နိုင်ငံခြားမှာ ရနေတဲ့ ပမာဏထက် သိသိသာသာ နည်းပါမယ်) ရနိုင်ရင် ၊ ရနိုင်တဲ့ အလုပ်အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေရင် အမိမြေကို တကယ်ပြန်မယ့် သူတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက မသေးပါဘူးဗျာ
နံပါတ် ၃ အပိုဒ် ရဲ့ ဆိုလိုချက်ကိုလည်း အပြည့်အဝ သဘောမတူနိုင်ပါ။
ဆောရီးဗျာ .. လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခြင်းပါ။
ပြင်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပညာသင်စရိတ် သက်သာတာမှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိသားစုရဲ့ ဝင်ငွေကရော ဘယ်လိုလဲ .. ပြည်ပနိုင်ငံတွေက လူတွေရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မိသားစု ဝင်ငွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ မေ့မထားသင့်ပါဘူး
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက သူ့အထွာနဲ့သူတော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက်လည်း ပညာသင် စရိတ်က မသက်သာလှပါဘူး
ဆိုကြပါစို့ဗျာ ... အဖေက ကျောင်းဆရာ ၊ အမေက ကျောင်းဆရာမ .. သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လစာ ... သားသမီး မွေးလာရင် သူတို့ ဘယ်လို ကျောင်းထားနိုင်မလဲ .. တွေးကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ
ဒါကတော့ ရေးရင် အများကြီးမို့ ကျွန်တော် ဆက်မရေးတော့ပါဘူး
ဒီလောက်ဆို ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ ကိုပေါ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်မှာပါ။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကျေးဇူးဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် မတပ်စေချင်တာပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ရပ်ရွာ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ်ကြိုက်သလို ချစ်ပါ။
ကျေးဇူးတွေ နဲ့ ပြောပြ နားချ နေတာကိုက တော်တော်မလတ်ဆတ်တဲ့ အမူအကျင့်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတွေကြောင့် ပြန်ပြီးပေးဆပ်ပါမယ်ဆိုတာ ပုံပြင် ဝတ္တုဆန်နေသလားလို့ပါဗျာ
ဒါက ကျွန်တော်တို့ တယောက်ချင်းစီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖြစ်စေမယ့် ခံယူချက် ခံစားချက်များစွာထဲက အကြောင်းအချက်မျှသာပါ။
အချုပ်ကတော့ ဒီ စာပုဒ်ရဲ့ အာဘော်ကိုလည်း သဘောမတူပါ။
နံပါတ် ၄ အပိုဒ်ကတော့ အားလုံး သဘောတူပြီးသားပါ။
၅ နဲ့ ၆ ကလည်း ၃ နဲ့ သဘောချင်း တူနေတာမို့ ထပ်မပြောတော့ပါ။
သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်ရတာကို နိုင်ငံတော်အား ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လို့ ပြောတဲ့သူ ရှိမယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါ။
ရှိခဲ့ရင်လည်း အံ့သြရုံပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ
အဲ .. ကိုပေါရဲ့ နိုင်ငံရေး စည်ရုံးမှု အပိုင်းရောက်လာပြန်ရော
ထောက်ပံ့ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကြဖို့ တောင်းဆိုသံကိုလည်း ကြားလိုက်ရတယ်။
ဒီ အကြောင်းက ပို့စ်တခု သပ်သပ် တင်သင့်တာပါ
ဒီ ပို့စ်မှာ ထည့်ပြောတာ မှားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကိုပေါ စည်ရုံးချင်လို့ ဘလော့ဂါတွေကို ချီးကျူးလိုက်ပြီ။
ထပ်မှားပြန်တယ်။ နမူနာ စံပြက မေငြိမ်းတဲ့
ကိုပေါ ဖြစ်စေချင်တာက ဆရာမလို အတွေး အရေးမျိုးထင်ပါရဲ့။
အဲလောက်ကြီး လောဘမကြီးနဲ့ ကိုပေါရ
လောလောဆယ်ကတော့ ခင်ဗျားအပါအဝင် အားလုံးဟာ လေထဲပဲ တာဝန်ကျေပြနေကြရတာပဲ မဟုတ်လားဗျာ
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားရဲ့ လက်တွေ့ပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ (တခြားလူတွေထက် ပိုလုပ်တာ) ကိုတော့ လုံးဝ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
ကိုယ်လို လိုက်မလုပ်လို့ ဆန္ဒစောပြီး အပြစ်တင်တာမျိုးက ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။
ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့ ကိုပေါ အနေနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘူးဗျ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်က လက်ရှိ စစ်အစိုးကို မလိုလားခြင်းပဲလေ
နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ကလေးကတော့ စာရေးဆရာမတယောက် (ဆွေဆွေအောင် ထင်တယ်) ရဲ့ အရေးအသားလေးကို သတိရပြီး ကိုပေါရဲ့ စတိုင်အတိုင်း သရော်လိုက်တာထင်ပါတယ်။
အဲမှာ ရှုပ်ကုန်တော့တာလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ကျွန်တော် ဘလော့ဂါ မဟုတ်ပါ။
ဘလော့ အများကြီးလည်း မဖတ်ပါ။
ကိုပေါ ဘလော့ဂ်ကိုတော့ ဖတ်ပါတယ်။
ဟိုးး အစကနေ အခု အချိန်ထိ
ဒီ Comment ကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ ပထမဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှားတာပဲ။ မှားတာကို မှားတယ်လို့ မြင်ဖို့ ခက်တယ်။ မှားတယ်လို့ မြင်ပြီးပြန်တော့လည်း ပြင်ဖို့ မလွယ်ပြန်ဘူး။ ဝန်ခံဖို့ကတော့ တော်ရုံလူတွေ လုပ်လေ့မရှိပါ။ ဝန်ခံဖို့ လိုအပ်တဲ့ အမှားဆိုတာကလည်း သိပ်များများစားစား မရှိတတ်ဘူးမို့လား ..
ကိုပေါရဲ့ ဘလော့ဂ် ပရိတ်သတ်တဦး
ပေါဘောထီးနဲ့ ပေါဘောမကတမျိုး သူ့ဟာ ငါ့ဟာ လုနေသေးတယ် ငါမှားရေးမိတာပါ ခင်ဗျားက ပေါဘောမ ကျုပ်က အနော်နိမတ်စ် ၁၁ခုထဲ ခင်ဗျားက ၀င်သွားတာကိုး ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ကျုပ်က ဂနေ့ ကိုပေါကို မိနစ်၂၀ အကုန်ခံပြောကြောင်း သိစေချင်တာ ဒါပါပဲ ငါးစိမ်းတန်းကတော့ ကိုပေါနေတာ နေမှာပေါ့ အရေးထဲ လာရှင်းပြနေရတယ်
ဂနေ့ တော်တော်ရယ်ရသည်။ ကျေးဇူးပါ ဘလော့ဖားသားကိုပေါရေ ကိုပေါက ဂေါ့ဖားသားတော့မဟုတ်ဘူး ဂေါ့ဖားသားကတော့ တကယ် လူသတ်သဗျာ ဒီဘလော့ဖားသားကတော့ အာဝဇွန်း ရွှင်ပါ့ဗျာ
ဆိုတဲ့လူ အဲသလောက် အရှည်ကြီး Comment ပေးမဲ့အစား Blog ထောင်ပါ့လား..
အရေးအသား လဲ ကောင်းနေသားဘဲ..
ဟို.. မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Anonmous :
comment 100 ပြည့်ကျရင် လာခဲ့ဦးနော်..
Why don't you try Ma Khin Ma Ma Myo's blog?
Sometimes I feel the same when I read some blog especially these day. But instead of cursing them, I simply stopped reading their blogs. Some people are writing really nonsense posts in the heat of our country's painful crisis.
But I think this time you are going way too far... There are people/bloggers who are sacrificing their lives than you/me/everybody. You shouldn't say like this by seeing some nonsense bloggers.
If I am not wrong you are the same age as 88 generation students. Where are you when they were protesting back in 1988? Where are you when they spent/still spending their lives behind the bars? If you are aware of this, you should feel embarrassed.
Please don't think too high of yourself by doing some political activity OUTSIDE the country.
No offense and nothing personal, it's just my opinion, I don't totally agree above post this time dude.
ဒီပို့စ်မှာ ကွန်မင့်အများဆုံးရတဲ့အတွက် လုံလဥဿဟ စိုက်ထုတ်ပြီး ကွန်မင့်ပွတ်သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း....း-)
အခု စနေနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံးလုံး အိမ်ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့အတွက် ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်သေးပါ။
သို့သော်.... မကြာမီ “ပြောပြန်ရင်လည်း မောင်ပေါလွန်ရာကျမယ်.... အပိုင်း(၂)” လာမည်။............ မျှော်။း-)
It's really Stupid..
U cannot help..
because..he 's already insult to Buddha and Buddhist...
so He'll not even care U.all Bloggers...!!
So Sorry for His Family, his Stupid Followers and His generation...
It's WASTE Of Life..
In spore Working Life..
We got FUN..
So Nga Paw ..and Family..
Keep it Up..U Stupid Effort..?
လေးစားပါတယ်.. လေးစားပါတယ်.... ဒီဇွဲနဲ့ ဆို ဒီမိုကရေစီ ရကိုရမှာ ပါ..... ဆက်လုပ်ကိုပေါရေ.....
ကိုပေါက သူမမှားဘူးတဲ့ ဆက်ရေးဦးမှာတဲ့....
ကွန်မန့်အများဆုံးရေးတာကို ထပ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရေမရ အဖတ်မရ တန်ဖိုးမရှိနေရာမှာ ဒီနေ့ ဒီလောက်ပဲ အချိန်ကုန်တော့မယ် နောင်ခြေဦးလှည့်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး ဘလော့ဂါတွေအားလုံးကို ဆော်နေတာကို အမြင်မတော်လွန်းလို့ ၀င်ရောက်ရေးသားတာပါ ဒါဟာ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပါပဲ နောင်လည်း ဒီလို တန်ဖိုးမရှိသော ဘလော့ကို ဘယ်တော့မှမလာပါ ကိုပေါ လက်လျော့နေလေရော့ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်ပါတော့ နောက်လည်း ဒီလိုဆော်တာလေးတွေ ရေးနိုင်ပါစေ နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်စေဖို့ အကြောင်းပြ လူတွေအားလုံးကို စော်ကားနိုင်ပါစေ ကိုပေါရေ အားမွေးထားအုံး ပြည်သူ့မေတ္တာခံယူဖို့ ခင်ဗျားကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်ခင်ဗျာ အတော်အရေထူတဲ့လူပဲ ဒူလည်း ဒူပုံပဲ လုပ်ပါ လုပ်ပါ ဘလော့ထဲ အော်တာပဲ ဘယ်သူလာဆော်နိုင်တာမှတ်လို့ နော့ ဟဲဟဲ ဒီနေ့တော့ အရယ်ရဆုံးပို့စ်ကိုလာဖတ်သွားတာ educated blogger တစ်ယောက်ရဲ့ ချီးသုတ်ရမ်းပို့စ်ပေါ့ခင်ဗျာ
ကိုပေါ နောက်နေ့အားရင် ခုလည်း အားရင် အားနေပုံပါပဲ reply ပြန်ချင်ပြန်ဗျာ ကျွန်တော်တော့ အိပ်ပြီ
I won't say what Ko Paw have written is right or wrong. But I can see the frustrations of all the people here including Ko Paw. What I like most is what someone above wrote..
" အောင်ဆန်း said...
ကိုပေါရေးတာကို သဘော တ၀က်တူတယ်။ ကျန်တဲ့တ၀က်တော့ ဖွင့်မပြောဘူးဗျာ။ ကိုပေါလောက် သတ္တိမရှိလို့။ ဒါဏ်ရာသီချင်းကို ပေါက်ကွဲစွာဆိုပြကြမယ့် Anonymous များစွာရဲ့ အနုပညာကိုလဲ တ၀ကြီးခံစားရအုံးမယ်ထင်ပ။"
His vision is so right! :D
မသိဘဲနဲ့ ရမ်းသမ်းမပြောနဲ့ ပေါကြီးက
ပြည်သူကိုတော့ နှိပ်စက်မှာ မဟုတ်ဘူးကွ။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့ အပြည့်အဝ
အာမခံတယ်။ အပြာသီချင်းနဲ့ အပြာစာပေ ကိုတောင်မှ
လူထုကြားမှာ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်တင်ပြခွင့်ပေးမယ့်
ပေါကြီးပါ။ မိန့်ခွန်းခြွေတာကတော့ ဝါသနာကိုး၊ ဒါကိုတော့
ဘလော့ဂ် မရှိသေးဘူး။ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးအတွက်
အားလုံးကို အမုန်းခံ တာဝန်ကြေတဲ့ ပေါကြီးပါ။
ကျန်တဲ့ဘလော့ဂ်တွေကိုတော့ ပေါကြီးက ပျင်းတောင်ပျင်းသေး၊
ဘလော့ဂ်ဂါလောကမှာ ပေါ်လစီတွေ မရေးတာဆိုလို့
လို့ အော်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလို့ထင်လား
အေအေပီပီ ကိုထောက်ပံ့မှ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုနေတာလို့ ဆိုလိုချင်တာလား?
ဖရီးဘာမားဆိုတဲ့စတစ်ကာကို ဘလောခ်မှာတင်ထားမှ နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုတာလား
နိုင်ငံေ၇းအသိုင်းဝိုင်းထဲက မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံေ၇းကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ လုပ်တော့ရော (ငါ့ကိုမထောက်ခံဘဲ နဲနဲလောက်သူ့တို့ကိုပြန်ထောက်လိုက်ရင် စပိုင်လို့ထင်တတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအသိုင်းဝိုင်းက လူတစ်ချို့ကိုေ၇ာ)တကယ့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ထင်ပါလား?
ဘာကန်ပိန်းညာကန်ပိန်း ဘာလုပ်ကြပါ ညာလုပ်ကြပါ ကျနော်ကတော့ အရင်က ဘာကောင်ကြီးပါ အခုတော့ အမေရိကားမှာ အဆိုင်လန်ခံပြီး လက်တေ့ာတစ်လုံးနဲ့ ပေါတာကြီးလုပ် ချီးခြောက်ရေနူးပြီး ငါတို့နိုင်ငံေ၇းလုပ်လာတာ နှစ်(၂၀) ကျော်ပြီးကွလို့ ဖင်ကုန်းအော်နေတဲ့ ကောင်တွေ (လှုပ်ရှားလာတာ မှန်ပေမယ့် movement မရှိသေးတာကိုတော့ မပြောဘူး )သူတို့ ပြောတာ ကို မလုပ်ရင် "မင်းတို့ကောင်တွေ နိုင်ငံရေးကို ဘယ်လောက်နားလည်လို့လဲ ဆိုပြီး" ချီးခြောက်ရေနူးနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ကို သမားဂုရုကြီးတွေ ကိုရော..(မိုးသီဇွန်ရေ ထိရင်နာသာနာ)
(မဲဆောက်မှာ ဗွက်ပေါက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အလစ်ချောင်းခြေထိုးဖို့စောင့်နေတဲ့ နိုင်ငံေ၇းသမားအယောင်ဆောင်တွေကြောင့် နိုင်ငံေ၇းကိုစိတ်ဝင်စားပေမယ့် စိတ်ပျက်သွားတဲ့လူငယ်တွေ မနည်းပါဘူး ဆိုတာ ကိုပေါသိပြီးသားပါ)
ငါတို့က နိုင်ငံရေးလုပ်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီကွ ဆိုပြီးမဏ္ဍပ်တိုင်တတ်ပြ အာပေါင်အာရင်းသံသံနဲ့လေပစ် (မသိရင်သူတို့ဘဲ ထိုင်ရှစ်ခိုးရမလိုလို )
အဲလို လူတွေ လို မဖြစ်အောင်ေ၇ှာင်ရင်းက နိုင်ငံရေးလောက ဆိုတာကိုစိတ်နာလို့ စွန့်ခွာသွားသူတွေအတွက်ရော၊၊၊
မဲဆောက်မှာနေပြီးနိုင်ငံေ၇းလုပ်လို့ကတော့ ကိုပေါ့ဝေဖန်မှုတွေက ဖတ်ကောင်းအုံးမှာဘဲ(အဲလိုဆိုလဲ ခေါင်းဖြတ်မယ်ကြိမ်းတာနဲ့ ကိုပေါခေါင်းလဲ ကျန်ပါ့မလား):P
မျိုးယုတ်မောင် စကားပြေ လာပြန်မနေနဲ့
Phoe Chit said...
Why don't you know the real feeling of 99% of Myanmar who are working in abroad. Pls persuade ppl with proper way. Not in this way.
်ကိုမျိုးမြင့်မောင်ရဲ့ အကျိုးရှိ်တဲ့ Discussion လိုမျိုး Comments တွေကို ဖတ်ရတာအားရစရာပါ။
“ပြောပြန်ရင်လည်း မောင်ပေါလွန်ရာကျမယ်.... အပိုင်း(၂)” ကိုလည်းမျှော် နေပါသည်
ဒီပို့စ် ဖတ်မိပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေ က သူအနားယူ ရင် သူ့နေရာဆက်ခံပြီး မြန်မာပြည်ကိုခေါင်းဆောင်မယ့် လူ(ကိုပေါ) ကို တွေ့သွားလို့ ဒီနှစ်ကုန် စိတ်ချလက်ချ အနားယူတော့မယ် တဲ့။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး အဖြစ်တော့ မျိုးမြင့်မောင် ကို လျာထား နေပြီဆိုပဲ။
ကိုပေါရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်လေး များ သိချင်စမ်းပါဘိတော့။ ငယ်ငယ်က တော်တော် ဘ၀ နာခဲ့ပုံ ပဲ။ ကိုယ်ဘာသာ လည်း ချင်ကာပူ မှာ နိုင်ငံရေး ဘလောက်ဂါ ငါ ဆိုတဲ့ မာန်လေး တွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံရေး ကို ရသမြောက်အောင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကျကျ ရေးတတ်သူကြီး အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဘယ်တော့မှ လာမဖတ်ချင်လောက်အောင် အရေးအသားတွေက ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေတယ်။
အာကျယ်တာလေးရယ်၊ စကားတွေကို ငါ့စကားနွားရ ပြောတတ်တာလေးရယ်၊ သူများတွေကို နဲနဲ အထင်သေး တတ်တာလေးတွေ လျော့လိုက်ရင် နိုင်ငံရေး လောကမှာ စင်ပြိုင် အစိုးရ ထောင်လို့ရပြီဗျ။
ပေါဘောမနဲ့ ပေါဘောထီးက တမျိုး
ငါက ပေါရဲ့ဘောကိုမလို့ ပေါဘောမလို့ပြောတာကို... နင်က ဘာကိစ္စနဲ့ပေါဘောထီးရတာတုန်း... ပေါဘောထီးရဲ့..
ဒီမှာ အမျိုးသားရေးတွေ ပြောနေပါတယ်ဆို......
အိမ်ရွှေ့ပြောင်းနေတယ်? လက်ရှိအိမ်က ဝယ်ထားတာမှလား? ဘာလို့ပြောင်းရတာလဲ? ဪ သိပြီ UPGRADE လုပ်လိုက်တာ (ရှင်ကျားပူ မှာ HDB ဝယ်ရင် down grade လုပ်လို့မရပါ) ၄ခန်:ကနေ ၅ခန်:ပြောင်းတာလား? ၅ခန်:ကနေ ကွန်ဒို ပြောင်းတာလား? တယ်လဲ ကြီးပွားနေပါလာ: မျိုးချစ်ဘလောက်ဂါကြီးရဲ့ ဘယ်ကဝင်ငွေတွေ ကြမ်:နေလဲ?
ဓါတုကလျာရဲ့ ကယ်ပါအုံး ကိုပေါ ကိုပေါ တယ်လည်း ဆော်ခံနေရပါလားဟင် ၁၂၃ ကွန်မန့်တောင်ပါလား ဟရို့
ကိုပေါဘောကို ၁၂ ထပ်မှ ပစ်ချသူ
Paw Of The Year... 2009
A lot of Shameless and Arrogant..
If you don't care society..?
At least you should keep yourself...
a little bit of Decency & Integrity...!
Personally, I don't know you at all..
But you are at NLD side..????
I feel Sad..!!!
shut your shit....
That is why ' Burma is still not worth with Democracy '.
အပေါ်က ” ကို/မ မင်း ” ဆိုသူသို့............
ဲ့အခြေခံအကျဆုံးအချက်ဘဲမဟုတ်လားခင်ဗျာ။ ဆဲတာကတော့ အကို/မ အတွက်သာမကကျန်တဲ့
comments ရေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါအမြင်ဒါမှမဟုတ် ပေးချင်တဲ့ message ပါလွဲသွားစေနိုင်ပါ
Anonymous.... အခုလို ထောက်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ Min ဆိုသူရဲ့ ကွန်မင့်မှာ ဒီဘလော့ဂ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ဘလော့ဂါနှစ်ယောက်ကို အသားလွတ် ဆဲရေးထားတဲ့အတွက် သူ့ကွန်မင့်ကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်ဘလော့ဂ်အရှေ့ပိုင်းပို့စ်တွေမှာ ပြောခဲ့သလို လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အမြင်မတူလို့လဲ ပိတ်ပင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆုံးစွန် ကျနော့်ကို ဆဲရေးနေတာတွေကိုတောင် သူတို့မကြိုက်လို့ ဆဲတာလို့ သဘောထားတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းထားပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်ဘလော့ဂ်နဲ့မဆိုင်သူများ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို ထိခိုက်ရေးလာတဲ့ ကွန်မင့်မျိုးဆိုရင် ဖျက်မယ်လို့ ပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်း Min ဆိုသူရဲ့ ကွန်မင့်ကို ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖျက်လိုက်ပါပြီ။
ဒီလိုတွေ ငြင်းကြခုန်ကြလို့ ဒီမိုကရေစီ မရခြင်းမဟုတ်ပါ...ကိုပေါတို့လို စိတ်ကူးယဉ်...နိုင်ငံရေးသမားတွေ မင်းမူနေလို့
စာကြီးပေကြီး ယဉ်ကျေးလိမ်မာ အာပလာတွေများနေလို့..ဒီမိုကရေစီမရတာပါ..
ဆဲတာနဲ့မှ တန်လို့ ဆဲကြတာပါ..
ဘလော့ဂါနဲ့ အပေါင်းအပါတွေက က စမိုက်ရိုင်းလို့ လူတွေက ပြန်မိုက်ရိုင်းတာ မှန်ပါတယ်....
ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်း ငြင်းခုန်ဝေဖန်မှုကို မကန့်သပ်ပါ...
ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တော့ သေတောင် ဒီမိုကရေစီမရပါ... သမိုင်းကြောင်းနဲ့မျက်ချေမပြတ်သူတွေသိသင့်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် ကိုပေါနဲ့ အပေါင်းအပါများကိုလုံးဝ အထင်မကြီးပါ...
ဟုတ်တယ်ဗျို့... တကယ် သူတို့ပြုတ်နိုင်တဲ့ လက်တွေ့ အလုပ်တွေရှိရင် လက်တို့လိုက်... လူထုတရပ်လုံးပါလာစေရမယ်....
မယောင်ရာဆီလူးပြီးလူထုကို မြန်မာတွေကိုနားမလည်ဘူးလို့ စော်ကားလို့ရတော့ ဒီလို ဆုလာဘ်ပဲရမယ်..ဒီမိုကရေစီရဘို့ နွားအစိုးရကို အရင်ဖြုတ်ချပါ...
လူထု တရပ်လုံးပါဝင်အောင် စည်းရုံးကြပါဦး အရင်.. ပြည်သူလူထူမပါပဲနဲ့ ဘာမှ လုပ်မရပါ.... ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတဲ့ ဘိုဆန်ဆန် အလုပ်တွေနဲ့ conversation တွေက နွားအစိုးရအတွက်... ကျွဲပါးစောင်းတီးပါပဲ.... အဲတာကို သဘောပေါက်တဲ့သူတွေက မလာချင်လို့ မလာတာကို.. ခင်ဗျားတို့လောက်ပဲ ကိုယ်ကျိုး မစွန့် သလိုလို ကြွေးကြော်နေကြတာ မတရားပါဘူး...မေးချင်တာက..ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးလို့ ဘာမှ ထူးမလာဘူးဆိုရင်.. ဘာအစီစဉ် ရှိပါသေးလဲလို့ပါ..
ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဖို့ဆိုတာကို ကျနော်တော့ ဘယ်မြန်မာကိုမှ မတိုက်တွန်းဖူးဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်နေပါတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့က ရိုးရိုးလူတွေပါ။ မေတ္တာရှင် သူတော်စင်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်မှ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျနော်လည်း လွတ်လပ်မှာမို့ တနည်းဆိုရရင် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဖို့အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ တနည်းတလမ်းက ပါဝင်ခြင်းဟာ ကျနော့်ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ လုပ်နေတာပါ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ကိုယ်ကျိုးအတွက် တကယ်လုပ်ကြပါတော့လို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘာအစီအစဉ်ရှိမှန်း တကယ်သိချင်ရင် အပြင်မှာ လူချင်းဆုံပြီးပြောကြရင် မကောင်းဘူးလား။ ခင်ဗျားပုံက စိတ်အားထက်သန်ပုံပဲ။ အခုလို ဘာလုပ်ကြမလဲလို့ စိတ်ထက်သန်စွာမေးတာကို လေးစားပါတယ်။
လူချင်းဆုံမှ ပြောပြမယ် ဆိုပါလား.... ဘာကြီးလဲဟ
တန်းတော့ မညှိနဲ့ ပေါ့ဗျာ.ခင်ဗျား လုပ်သလို
အကုန်လိုက် လုပ်ရမယ် လို့တော့မလုပ်နဲ့လေ.
လှူတယ်ဆိုတာလဲ.ကာယကံ ရှင်ရဲ့ “သဒ္ဒါ” ရှိသလောက်ပေါ့လေ.(ခင်ဗျား.မုန်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ လူကြီးတွေ)လို အတင်းကြီး တော့ မလုပ်ချင်နဲ့လေ..မကူချင်တဲ့ လူလဲ ရှိမပေါ့.
"DemocraZy" တော့ ကန်တော့ပါသေးရဲ့..
Online တက်လာတဲ့လူတိုင်း မညံ့ပါဘူး
“သူရဲကောင်း” နဲ့ “မိုက်ရူးရဲ” ကောင်းကောင်းခွဲခြား တတ်သူတွေချည်းပါဘဲ.
You guys has shown your true colors. and you also are living proof that our society isn't mature enough to agree to disagree.
and I wonder whether you guys ever participated in online forums. By chance, if you have experienced participating in famous Burmese forums, you might have noticed how moderators there encourage open discussions while discouraging rants. Perhaps, you would have been banned if this wereaforum.
One last thing, in any case if you are thinking to give up Burma just because ofablog post orablogger, I would urge you to proceed. Because Burma would be better off without you.
ကျူတန်းထဲက လူသားတွေနဲ့ တယ်လဲ ပွဲဆူနေကြပါလားကွယ်ရို့.... ကောင်းလေးစွ ...ကောင်းလေစွ...ကောင်းလေစွပါတကား.....
ဘာရွာစားကြီးလဲ... ----ီးဘဲ